वाइफाइको तरंगले क्यान्सर !
२०७१ माघ २ गते, शुक्रवार ०९:५२:०३ बजे
एक विवादास्पद अध्ययनले वाइफाइ इन्टरनेट बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको भन्दै बालबालिकालाई वाइफाइको प्रयोगमा सीमा लगाउन अभिभावकहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
२०७१ पुस २२ गते, मंगलवार ०८:२१:५१ बजे हामीले स्वस्थ रहनका लागि भरसक प्रयास गरे पनि वरिपरिको वातावरणबाट शरीरमा विषालु तत्वले प्रवेश गरिहाल्छन् । यसरी हावा, पानी, माटो, कस्मेटिक, साबुन आदिको माध्यमबाट प्रवेश गरेमा तत्व रक्त प्रणालीमा पुग्छन् । रगतमा पुगेका खतरनाक तत्वलाई छानेर पिसाबबाट बाहिर निकाल्ने काम मिर्गौलाले गर्छ । बारम्बार अधिक मात्रामा विषालु तत्व छान्नु पर्दा मिर्गौलामाथि दबाब बढ्छ । यसैले मिर्गौलाको कार्यबोझ घटाउन हामीले पनि खानपिनमा होस पुरयाउनु जरुरी हुन्छ । शरीरबाट विषालु तत्व सहज रूपमा बाहिर निकाल्न मिर्गौलालाई सहयोग गर्ने केही खाद्य वस्तुहरू
पखेटा युक्त कण्डमले पायो पुरस्कार
२०७१ मंसिर १४ गते, आईतवार १२:४५:५९ बजे यौन सम्पर्कका बेला प्रयोग गर्न सजिलो हुने गरी डिजाइन गरिएको एक अनौठो कण्डमले स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको छ । नेदरल्याण्डको एक कम्पनीले बनाएको विन्जम्यान नामको उक्त कण्डमले यसको नौलो डिजाइनका कारण आइ एफ गोल्ड अवार्ड प्राप्त गरेको हो । नौलो डिजाइनका प्रडक्ट निर्माण गर्ने कम्पनीलाई प्रदान गरिने यो विश्वस्तरीय अवार्ड यसअघि नोकिया तथा एप्पल लगायतले समेत प्राप्त गरेका थिए ।
सहमतिमै संविधानः प्रधानमन्त्री
२०७१ मंसिर १३ गते, शनिवार १७:२४:३० बजे
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमतिमै माघ ८ मा संविधान जारी हुने दोहोर्‍याएका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शनिबार बालुवाटारमा भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताए । 'हामी छलफलमै छौं,' उनले भेटपछि ईकान्तिपुरसित भने, 'आशा छ सबै दल ढिलोछिटो एउटा सहमतिमा पुग्नेछन् ।'
सबैभन्दा पातलो कण्डम बनाएर विश्वकिर्तिमान
२०७१ मंसिर १३ गते, शनिवार १७:२२:४१ बजे किर्तिमान भन्ने कुरा विभिन्न काम गरेर राख्न सकिन्छ । चीनको एक कम्पनीले सबैभन्दा पातलो कण्डम बनाएर विश्वकिर्तिमान कायम गरेको छ । ग्वान्झाउको डेमिङ्ग युनाइटेड रबर प्रडक्ट कम्पनीले मात्र ०.०३६ मिलिमिटर मोटाइ रहेको ल्याटेक्स कण्डम उत्पादन गरेको हो । यो कण्डमले जापानी कण्डमलाई माथ दिँदै विश्वको सबैभन्दा पातलो कण्डमको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल भएको छ ।
जहाज स्टार्ट नभएपछि यात्रुले धकेले
२०७१ मंसिर १३ गते, शनिवार १७:२१:२५ बजे गाडी स्टार्ट नहुँदा धकेलेर स्टार्ट गर्नुपरेको त हामीले देखेभोगेकै कुरा हो । तर के जहाज स्टार्ट गर्न समेत यात्रुले धकेल्नुपरेको कुरा सुन्नुभएको छ ? यात्रुले धकेलेर जहाज स्टार्ट गर्ने कुरा सुन्दैमा निकै भयानक लाग्छ र यस्तो मूर्खता कहाँ होला र ? धकेलेर स्टार्ट गर्नुपर्ने जहाजमा को चढ्ला ? तर ७० जना यात्रु बोकेको एक जहाजलाई यात्रु आफैले धकेलेर स्टार्ट गराउनुपरेको छ ।
ठूलो ब्रा लगाउने महिला बढि खर्चालु
२०७१ मंसिर १३ गते, शनिवार १७:१९:२७ बजे भनिन्छ, गोजीमा जति बढि पैसा हुन्छ मान्छे उति नै खर्चालु हुन्छ । तर, एक नयाँ अध्ययनले भने महिलाहरुको खर्चालु बानीका विषयमा निकै नै भिन्न तथ्य पत्ता लगाएको छ । महिलाहरुको खर्च गर्ने बानी र उनीहरुले लगाउने वक्षकवच अर्थात् ब्रा को आकारबीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
बन्दैछ ५ किलोमिटर लामो सुनको सिक्री
२०७१ मंसिर १३ गते, शनिवार १७:१७:५५ बजे सुनको सिक्री, घाँटीमा बेर्ने जत्तिकै लामो कहाँ हो र ? ५ किलोमिटर लामो । झ्वाट्ट सुन्दा यो हुनै नसक्ने कुरा जस्तो लाग्छ । तर यो सत्य हो । सुनको सहर भनेर चिनिने युएइको दुबइमा विश्वकै सबैभन्दा लामो ५ किलोमिटरको सुनको सिक्री बनिरहेको छ । यो सुनको सिक्री बनाउनकालागि २२ क्यारेट सुन १ सय ८० किलो लाग्नेछ ।
सय वर्षकी जिजुआमाले आकाशबाट हाम फालिन् (फोटोफिचर सहित)
२०७१ मंसिर १३ गते, शनिवार १७:१४:४५ बजे
कनिंघमका लागि त्यो तेश्रो स्काइ डाइभ हो । यसअघि उनले दुइपटक आकाशबाट हाम फालिसकेकी छिन् । स्काइडाइभ गर्नुअघि उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो र डाक्टरले उनको स्वास्थ्यले आकाशबाट हाम फाल्न कुनै फरक नपर्ने प्रमाणित गरिदिएका थिए । ती वृद्धालाई १ सय वर्षमा स्काइ डाइभिङ गराउने कम्पनी सरटोगा स्काइडाइभिङका अनुसार उनी स्काइडाइभिङ गर्ने सबैभन्दा पाको उमेरकी महिला हुन् ।
२०७१ मंसिर ९ गते, मंगलवार १८:३३:१६ बजे मोबाइल एप्लिकेसन सम्बन्धि एक अध्ययनले एन्ड्रोइड तथा आइओएस अपरेटिङ सिस्टमका मोबाइलमा चल्ने एप्लिकेसन मध्ये ७५ देखि ९७ प्रतिशत एपहरु ह्याक गरिएको खुलासा गरेको छ ।
मानिसको मलमुत्रबाट गुड्यो ४० सिटे बस
२०७१ मंसिर ५ गते, शुक्रवार १२:०१:५५ बजे मानिसको मलमुत्र तथा खाद्यजन्य फोहोरबाट चल्ने यात्रुबाहक बस संचालनमा आएको छ । ४० सिटको यो ‘बायो बस’ मलमुत्र तथा खाद्यजन्य फोहोरबाट उत्पादित बायो मिथेनद्वारा चल्दछ ।
हप्तामा दुईपटक चार्ज गरे पुग्ने शक्तिशाली स्मार्टफोन
२०७१ मंसिर १ गते, सोमवार १०:३९:२२ बजे मोबाइल फोन निर्माता चिनियाँ कम्पनी जियोनीले अहिलेसम्मको सबैभन्दा शक्तिशाली ब्याट्री दाबी गर्दै नयाँ स्मार्टफोन ‘म्याराथन एम थ्री’ भारतीय बजारमा ल्याएको छ ।